गुटबन्दीको सिकार भएँ : अष्टलक्ष्मी शाक्य |
प्रकाशित मिति :2018-02-15 11:10:32
एमाले उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ की संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै धेरैले उनी सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने आकलन गरेका थिए । शाक्य आफैँ पनि यसमा ढुक्क थिइन् । तर, एमालेले आन्तरिक निर्वाचनद्वारा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचनमा उपाध्यक्ष शाक्य अर्का प्रदेश सांसद डोरमणि पौडेलसँग पराजित भइन् । र, उनको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो । पराजित भएसँगै शाक्यले आफूलाई पार्टी अध्यक्षले जालझेल गरेर हराएको आरोप लगाउँदै आएकी छिन् । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री चयन, शाक्य पराजित हुनुको कारण, उनले अध्यक्षमाथि लगाएका आरोपलगायतका विषयमा शुरोजंग पाण्डेले उपाध्यक्ष शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले एमालेभित्र के संकेत गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
पार्टीमा विचार, विधि र प्रणाली क्रमशः कमजोर हुँदै गएको मैले महसुस गरेकी छु । पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो भएन, रहेन । एकल प्रणालीबाट सञ्चालित भएको देखियो । मुख्य व्यक्तिले जे भने पनि मान्नुपर्ने, छलफल केही पनि गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अब यसबारे बारम्बार कुरा उठ्नेछ । प्रदेश संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीका बारेमा मैले स्थायी कमिटीमा हामी संघीयताको पहिलोपटक अभ्यास गर्दै छौँ, यो नयाँ अनुभव पनि हो, त्यसैले कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ? प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने विषयमा बारम्बार छलफलका लागि अनुरोध गरेँ । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । प्रदेशका विषयमा स्थायी समिति कहिल्यै गम्भीर भएको मैले अनुभूति गरिनँ । त्यसैले विचार, विधि, प्रणाली कमजोर हुँदै गएपछि, गुटबन्दी चर्किएपछि त्यसको सिकार म भएँ ।
चुनावका वेला प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा नाम प्रस्ताव गर्ने काम मेरो थियो । त्यसवेला अष्टलक्ष्मीले माधव नेपाल पक्षधरको नाम लगेर गुटबन्दी गरेको कुरा पनि आयो । यदि साँच्चै गुटबन्दी गरेको भए मैले त्यसवेला सबै जित्नसक्नेहरूको मात्र नाम लान पनि सक्थेँ । लडेर, बाझेर, टेबुल ठोकेर यो नाम हुनैपर्छ भन्न पनि सक्थेँ होला । तर, पार्टी बलियो बनाउन, सबै सन्तुलन मिलाउन त्यस्तो गर्न चाहिनँ । त्याग, योगदानको मूल्यांकन हुनुपर्छ, पार्टीले काठमाडौंसहित सबैतिर जित्नुपर्छ, बहुमत ल्याउनुपर्छ र यसका लागि सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा काम गर्नु नै आज गलत साबित भएछ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ । ईश्वर कमरेडलाई जिताउन उहाँले भनेकै नाम बैठकबाट पास भयो, माधव कमरेडलाई जिताउन त्यसै गरियो । मैले केही पनि दायाँबायाँ गरिनँ । त्यसैगरी, अरू नेताले जित्ने गरी टिकटको निर्णय गर्ने कुरा हुँदा मैले कुनै प्रतिवाद गरिनँ । तिनै नामका व्यक्तिले जितेर आउनुभयो, उहाँहरूलाई नै गुटबन्दीमा सामेल गराएर मलाई हराउने काम गरियो ।
एमालेले समावेशितालाई प्राथमिकता दिएर जनजातिलाई सभामुख, उपसभामुख, दलितलाई राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, महिलालाई सर्वसम्मत राष्ट्रपति बनायो । तर, त्यही एमालेले पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनाउने अवसर गुमाएर के सन्देश दिएको हो जस्तो लाग्छ ?
त्यही त मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ । किन यति सारो गर्नुपथ्र्यो, यसले के फाइदा पुग्थ्यो ? तपाईंले भनेजस्तै सात प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बनाएर नयाँ सन्देश दिन सकिन्थ्यो । पार्टीको प्रतिष्ठा नै बढ्थ्यो होला । तर, किन चाहेन, गहिरिएर बुझ्न सकेको छैन । किनभने मैले त्यस्तो कुनै कारण नै पत्ता लगाउन सकिरहेकी छैन । अयोग्य भएको भए अध्यक्षले सीधै तपाईं नउठ्नुस्, समर्थन गर्नै सक्दिनँ किन भन्नुभएन ? मलाई उठ्नुस् भन्ने, लगत्तै भेला गर्ने, अष्टलक्ष्मीलाई हराउन आदेश दिनेजस्ता कुरामा अरू के कारण हुन सक्छ र ?
तपाईंकै कुराअनुसार अध्यक्षले जित्ने चुनाव उठ्नुस् भन्नुभयो । तर, उहाँले छुट्टै भेला गर्दागर्दै, अर्को उम्मेदवार खडा गर्न लागेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि तपाईं प्रतिस्पर्धामा जानुभयो । यसको मतलब तपाईं जस्तोसुकै परिणाम पनि स्विकार्छु भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यति थाहा पाएपछि पनि जितिन्छ भन्नेमा ढुक्क ?
मलाई हार्छु भन्ने लागेकै थिएन । स्वतन्त्र ढंगले छाडेको स्थितिमा मैले राम्रै मतका साथ जित्थेँ । हस्तक्षेप गरिएपछि भित्रभित्र शंकाचाहिँ लागिसकेको थियो । तर, किन अन्तिममा ब्याक हुने ? त्यो परिणामले व्यक्तिगत रूपमा मलाई मात्र नोक्सान हुने पनि होइन, सिंगै पार्टीलाई हुने हो । अन्तिममा आएर फिर्ता लिँदा त डराएको सन्देश जान्थ्यो । म पार्टीको उपाध्यक्ष पनि भएकाले नेतृत्वले चाहेको भए अन्तिमसम्म पनि कुनै न कुनै निर्णय दिनसक्थ्यो पनि । मतदान सुरु भएपछि पनि निर्णय हुनसक्थ्यो । म किन ब्याक हुन्थेँ ? त्यसैले अन्तिममा जे परिणाम आए पनि स्विकार्छु भन्ने लाग्यो । धेरैको सहानुभूति रहेकाले गुटबन्दीका नाममा पूरै निषेध गरिन्छ होलाजस्तो पनि लागेको थियो । लाइन बस्नुअघि, बस्दाबस्दै पनि कतिपय जनजाति र महिला साथीहरूले अरू जे भए पनि तपाईं नै हो, यो प्रदेशमा तपाईंकै आवश्यकता छ भन्नेहरू पनि थुप्रै थिए ।
तपाईंले पार्टी अध्यक्षमाथि मात्र आरोप लगाउनुभयो । पार्टी प्रमुख भइसक्नुभएका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेलगायतका शीर्ष नेताहरू पनि हुनुहुन्छ । के सर्वसम्मत नगरी चुनाव गराउनुमा अरू नेताको दोष चाहिँ देख्नुहुन्न ?
मैले मुख्यमन्त्रीका लागि आन्तरिक निर्वाचन गर्नुहुन्न भन्दै आएँ । शंकर पोखरेल ५ नम्बरमा आफ्नै हिसाबबाट सर्वसम्मत भए पनि राम्रै भयो । त्यसपछि मैले पहिलो अभ्यासमा जान लागेकाले निर्वाचन गर्दा दुई पक्षमा विभाजन हुन्छ भनेर अडान राखेँ । विभाजित हुनेबित्तिक्कै सुरुदेखि नै काम गर्न असहज हुन्छ भनेकी हुँ । त्यसैले स्थायी कमिटीबाटै कहाँ, कसलाई ल्याउने हो सर्वसम्मत गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेँ । तर, त्यसमा शीर्ष नेताहरू कसैले पनि चासो राख्नुभएन । खाली लोकतान्त्रिक विधिमा किन डराउने भन्ने मात्र कुरा आयो ।
यसमा अरू नेता दोषी हुनुहुन्न ?
अरू नेताहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ । अध्यक्ष मुख्य दोषी हुनुहुन्छ । अरू पनि मुछिनुभएको छ । मेरो प्रस्तावमा स्थायी समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै भएन ।
परिणामलगत्तै तपाईंले अब प्रदेश सरकार, पार्टी कसरी सञ्चालन होला, हेरौँला भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । मुख्यमन्त्रीको शपथमा सहभागी नै नभई काठमाडौं फर्किनुभयो । तपाईंको यस्तो शैलीलाई लिएर कतिपयले लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् नि ?
मुख्यमन्त्रीको शपथबारे कसैलाई पनि थाहा छैन । यो दिन शपथ होला भनेर सांसदहरूलाई नै थाहा भएन । त्यसैले कति सांसदहरू फर्किसकेपछि मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरा बेठीक छ । सबैलाई वेलैमा जानकारी दिनुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा, भोलिपल्ट स्थायी समिति बैठक भएका कारण म उपसभामुखको निर्वाचनकै दिन काठमाडौं फर्किएँ । किनभने पीडा भइरहेकाले मलाई स्थायी समितिमा आफ्ना कुरा राख्नु थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको शपथबारे मलाई मात्र होइन, अरू धेरै सांसदलाई कुनै जानकारी छैन । प्रदेश कसले, कसरी चलाउला भन्नुभन्दा पनि डोरमणिजीसँग मैले रिसइबी देखाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । उहाँसँग त मैले सहज रूपमा कुराकानी गरेकी छु । चुनाव जितिसकेपछि उहाँले भेटेर कुरा गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई बागबजारमा बोलाएर कुरा गरेँ । चुनावअघि पनि उहाँले भेटेरै तपाईं आउने हो भने मेरो दाबी रहन्न, मलाई पनि तपाईंको टिममा बसेर काम गर्ने रहर छ, सहज हुन्छ भन्नुभएको थियो । मैले तपाईंजस्तोे व्यक्तिले भन्नुपर्ने नै थिएन, हामी टिम मिलाएर र मिलेर काम गर्ने हो, टिममा बस्नुपर्छ भनेर कुरा भएको हो । बरू उहाँले तपाईं आउने हो भने कसैले दाबी गर्नुहुन्न, राजेन्द्र पाण्डेले पनि गर्नुहुन्न भन्नुभएको थियो ।
निर्वाचन जित्नेबित्तिकै मैले डोरमणिजीलाई बधाई दिएकी छु । अहिले पनि सोधिरहनुभएको छ । पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएकाले धेरै कुरा थाहा पनि छैन, मैले यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर बताइरहेकै छु । मेरो आपत्ति अध्यक्ष, शीर्ष नेता र स्थायी समितिप्रति हो । वरिष्ठ नेताहरूले पनि गुटबन्दी गर्नुभयो त भन्दिनँ, किनभने माधव कमरेड त्यसवेला धनगढी हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन । म प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा गम्भीर छु । राजनीतिक गफले मात्र प्रदेशमा विकास हुँदैन । हामीले नमुना विकसित प्रदेश बनाउन खाका पनि बनाइरहेका छौँ । संयोजकको हैसियतमा म प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु । मुख्यमन्त्रीले पनि काम कसरी गर्ने समन्वय गर्नुपर्छ ।
दुईजना मन्त्री नियुक्त भइसक्नुभयो । तपाईंसँग परामर्श भएको छ कि छैन ?
यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएको छैन । को–को मन्त्री भए भन्ने कुरा शपथग्रहणपछि मात्र थाहा पाएँ । पार्टीको प्रदेश प्रमुख म हुँ, केही पनि थाहा छैन ।
माधव नेपाल समूह मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन तयार छैनन् भनिन्छ नि ?
मनस्थिति बनाउने, नबनाउने कुरै होइन । कामै एकपक्षीय भइरहेको छ । मैले जे नहोस् भन्ने चाहेकी थिएँ, त्यही भइरहेको छ । अहिले पनि भन्छु, सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ । हामी विभाजित मनस्थितिका साथ अघि बढ्यौँ भने गर्न सकिने काम पनि केही पनि हुने छैनन् । किनभने हामी मात्र प्रदेश सभामा छैनौँ, अरू दलका साथीहरू पनि छन् । बहुमत ल्याएका कारण सबैलाई समेटेर लाने दायित्व हामै्र हो । तर, हाम्रै (५८ जना) सांसद विभाजित भएपछि र एउटा पक्ष एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि स्थिति के हुन्छ ?
प्रदेश सभामा पार्टीका पोलिटब्युरो तहका सिनियर नेताहरू पनि हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीले सल्लाह गर्नुभयो भने के तपाईं ती सिनियर नेताहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउन तयार हुनुहुन्छ ?
त्यसमा त छलफल गर्नुपर्छ । पशुपतिजी, अरुण, माधव पौडेल, राजेन्द्रमान हुनुहुन्छ । यस्ता कुरामा बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ । तर, आफ्नो खुसीले चलेर त कसरी हुन्छ र ? पहिलो अभ्यासमा छौँ, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? पहिला त बसेर छलफल गर्न तयार हुनुपर्‍यो नि । हाम्रो बहुमत छ । दुई पार्टी एकता हुँदै छ । यस्तो वेलामा पनि संकीर्ण बनेर, गुटबन्दी गरेर कसरी चल्छ ?
अहिलेसम्म समन्वय नभएको कुरा गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । सरकार र संसदीय दल समन्वयविना चलाउन थाल्नुभयो भने उहाँलाई प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा कुनै एक्सन लिनुहुन्छ त ?
उहाँलाई एक्सन लिने कुरा अहिले नगरौँ । त्यसरी जानु पनि उपयुक्त हुँदैन । समझदारी र समन्वय गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर भनेकी छु कि अब तपाईंले पार्टीको प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । बरू कुनै अप्ठ्यारो छ भने भन्नुस् । प्रदेशको निर्णयविपरीत चल्नु हुँदैन । उहाँ सरकार प्रमुख हो । सरकार पार्टीसँगको समन्वय र संयोजनमा चल्ने गर्छ । केन्द्र सरकार होस् या प्रदेश सरकार पार्टीलाई बाइपास गरेर चल्नै सक्दैन । त्यसैले उहाँले संयोजन गर्नुभयो भने मैले साथ दिनैपर्छ । उहाँ संयोजनकारी भूमिकामै अघि बढ्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
साभार : नयाँपत्रिका